Tilmaamaha Dhaqaalaha ee Muhiimka ah, Tilmaamaha Ganacsi ee Forex
Muhiimadda Tusaha Dhaqaalaha
Tilmaamayaasha dhaqaalaha ayaa ah tirakoob muhiim ah oo muujinaya jihada dhaqaalaha. Dhacdooyinka dhaqaale ee muhimka ah waxay kobciyaan dhaqdhaqaaqa qiimaha miisaanka, sidaas darteed waa muhiim in la helo qoysaska dhacdooyinka dhaqaale ee adduunka si ay u sameeyaan falanqayn aasaasi ah oo aasaasi ah, taas oo u sahli doonta ganacsatada Forex in ay sameeyaan go'aano ganacsi oo la ogeysiiyo.
Tarjumaadda iyo falanqaynta tilmaamayaashu waxay muhiim u yihiin dhammaan maalgashadayaasha markay tilmaamayaan caafimaadka guud ee dhaqaalaha, rajaynaya xasilloonideedana u suurtageliya maalgashadayaasha in ay ka jawaabaan wakhtiyada dhacdooyinka lama filaanka ah ama aan la saadaalin karin, oo loo yaqaano naxdinta dhaqaale. Waxa kale oo loo gudbin karaa "ganacsiga qarsoodiga qarsoodiga ah" sida ay muujinayaan waxa soo socda, waxa laga filan karo dhaqaalaha iyo jihada ay suuqyada qaadan karaan.
QAABKA QALABKA BULSHADA (GDP)
Warbixinta GDP-ka ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan dhammaan tilmaamayaasha dhaqaalaha, maadaama ay tahay qiyaasta ugu weyn ee guud ahaan guud ahaan dhaqaalaha. Waa wadarta guud ee qiimaha lacageed ee dhammaan alaabooyinka iyo adeegga soo saaray dhaqaalaha oo idil inta lagu guda jiro rubuc qarniga lagu qiyaasay (kuma jiraan hawlaha caalamiga ah). Soo saarida dhaqaalaha iyo kobaca - waxa ay yihiin miisaaniyadda, waxay saameyn weyn ku leedahay qof walba oo ku dhex jira dhaqaalaha. Tusaale ahaan, marka dhaqaaluhu uu caafimaad qabo, waxa aynu sida caadiga ah arki doonaa shaqo la'aanta hoose iyo mushahar kordhinta maadaama ay ganacsatadu u baahan yihiin foosha si ay ula kulmaan dhaqaalaha sii kordhaya. Isbeddel weyn oo ku yimaada miisaaniyadda, kor u kaca ama hoos, inta badan saameyn weyn ayay ku leedahay suuqyada, sababtoo ah dhaqaalaha xun ayaa sida caadiga ah ka dhigan yahay dakhliga hoose ee shirkadaha, kaas oo u turjumaya sicir hoose iyo qiimaha saamiyada. Maalgashadayaashu waxay ka walwalaan kobaca dhaqaalaha xun, oo ah mid ka mid ah dhaqaaleyahannada isticmaala si loo ogaado in dhaqaalaha uu ku jiro dhaqaale xumo.
TUSMADA SHARCIYADA (CPI)
Warbixintani waa qiyaasta ugu badan ee loo isticmaalo sicir bararka. Waxay qiyaastaa isbeddelka qiimaha xirmooyinka alaabta iyo adeegga bil kasta illaa bil. Sucuudiga suuq ee asaasiga ah oo uu ku jiro CPI wuxuu ka kooban yahay, waxaa laga soo qaatay macluumaadka kharashyada faahfaahsan ee laga soo ururiyey kumanaan qoys oo ku yaala Mareykanka ee kaararka ayaa ka kooban wax ka badan 200 qaybaha alaabta iyo adeegyada kala qaybsan sideed kooxood: cuntada iyo cabitaanka, guryaha , dharka, gaadiidka, daryeelka bukaanka, madadaalada, waxbarashada iyo isgaarsiinta iyo alaabo kale iyo adeegyo kale. Tallaabooyinka ballaaran ee loo qaaday si loo sameeyo sawir muuqda oo isbeddel ah oo ku yimaadda kharashka nolosha ayaa caawiya ciyaartoy dhaqaale si loo helo dareenka sicir-bararka, taasoo burburin karta dhaqaalaha haddii aan la xakamayn. Dhaqdhaqaaqa qiimaha badeecadaha iyo adeegyada waxay si toos ah u saameynayaan suuqgeynta dakhliga ee maalgashiga (maalgashiga soo celiya qaabka lacagaha go'an oo go'an iyo dib ugu noqoshada maamulaha mudnaanta). Sicir-barar habboon oo joogto ah ayaa laga filayaa dhaqaalaha soo koraya, laakiin haddii qiimaha khayraadka loo isticmaalo soo saaridda waxtarka iyo adeegyada si dhakhso ah u kordha, wax soo saarka ayaa laga yaabaa inay dareemaan hoos u dhac faa'iido. Dhinaca kale, deflation waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa hoos u dhaca dalabka macaamiisha.
CPI waxaa laga yaabaa inay tahay calaamadda dhaqaale ee ugu muhiimsan uguna ballaaran, waana qiyaasta ugu wanaagsan ee lagu ogaanayo qiimaha isbeddelka nolosha. Waxaa loo isticmaalaa in lagu xallilo mushaharka, faa'iidooyinka hawlgabka, qalabka canshuurta iyo tilmaamayaasha kale ee muhiimka ah. Waxay u sheegi kartaa maalgashadeyaasha waxa dhici doona suuqyada maaliyadeed, kuwaas oo wadaagaya xiriirka tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn ee qiimaha adeegatada.
MUHIIMAHA BUKAANKA (PPI)
Marka la eego CPI, warbixintan ayaa loo arkaa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee sicir-bararka. Waxay qiyaastaa qiimaha badeecadaha heerkulka sarreeya. Marka la barbardhigo CPI, PPI waxay qiyaastaa inta muwaadiniintu u helayaan badeecadda halka CPI ay cabirto kharashka ay adeegsadeen macaamiisha. Qodobka ugu weyn ee indhaha maaliyeyaashu waa awoodda PPI si loo saadaaliyo CPI. Aragtida ayaa ah in kharashka ugu badan ee kordhaya ee khibrad u leh ganacsatada loo gudbin doono macaamiisha. Qaar ka mid ah xoogagga PPI waa:
Inta badan tusaha saxda ah ee CPI mustaqbalka
Taariikhda 'taariikhda hawlgalka' ee taxanaha xogta
Dhibaatooyinka wanaagsan ee ka yimaada maalgashatada shirkadaha la daraaseeyay (isku-dhafka, macluumaadka badeecada, qaybaha adeegyada qaarkood
Suuqa si wanaagsan ayuu u dhaqaajin karaa
Xogta waxaa lagu soo bandhigay iyadoon la isbedelayn xilliga
Dhinaca kale, daciifnimada waa:
Elektarooni la'aanta, sida tamarta iyo cuntada ayaa jeexi kara xogta
Dhammaan warshadaha dhaqaalaha ma daboolayaan
PPI waxay soo saartaa waxyaabo badan oo la xidhiidha ciriiriga sicir bararka waxaana loo arki karaa inay tahay dhaqdhaqaaq ganacsi saameyn leh. Waa faa'iido u laheyd maalgashadayaasha ku jira warshadaha ku jira shuruudaha falanqaynta suuqyada iibka iyo dakhliga soo gala.
MAGAALADA SIDA LAGA HELO
Warbixintan waxay cabiraysaa alaabooyinka lagu iibiyo warshadaha suuqyada, waxayna qaadataa tijaabinta dukaamada tafaariiqda ee dalka oo dhan. Waxay ka tarjumaysaa xogta laga soo bilaabo bishii hore. Shirkadaha dhammaan noocyada kala duwan ayaa loo adeegsadaa sahanka, laga bilaabo Wal-Mart si ganacsiyo madax bannaan. Maadaama oo sahanku dabooli doono iibsigii bilihii hore, waxa uu ka dhigayaa tilmaan-bixiye waqtigiisu yahay oo kaliya maaha waxqabadka warshadahan muhiimka ah laakiin waxqabadka heerka qiimaha guud ahaan. Suuq-geynta iibsashada waxaa loo tixgeliyaa muujiye toos ah (metric taas oo muujinaysa xaaladda hadda dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee aag gaar ah) maadaama ay ka tarjumayso xaaladda hadda jirta ee dhaqaalaha, waxaana sidoo kale loo tixgelinayaa muujiye muhiim ah oo horey u ah sicir-barar, kaas oo abuuraya xiisaha ugu weyn Korjoogaha Wall Street iyo Guddiga Dib-u-eegida Shirarka oo kormeeraya xogta Maamulka Aagga Dawlada Dhexe. Siideynta warbixinta Sales Retail waxay keeni kartaa isbeddel celcelis ka sarreeya suuqa.
Caddayn ahaan sida saadaalinta cadaadiska qiimaha waxay keeni kartaa maal-galiyeyaasha inay dib uga fakaraan suurtogalnimada Fed-ka dhimista ama kor u kaca, iyadoo ku xiran jihada isbedelka hoose. Tusaale ahaan, koror muuqda ee iibka tafaariiqda ee dhexdhexaadinta wareegga ganacsiga ayaa la raaci karaa wakhti gaaban oo dulsaarka dulsaarka ah ee Fed-ka oo rajeynaya in la xakameeyo sicir-bararka suurtogalka ah. Haddii kororka tafaariiqda la joojiyo ama la yareeyo, tani macnaheedu waa in macaamiishu aysan kharashka hore u isticmaalin oo laga yaabo in ay saameyn ku yeeshaan sababtoo ah doorka muhiimka ah ee isticmaalka shakhsiyadeed ayaa ka ciyaaraya caafimaadka dhaqaalaha.
Ogeysiiska ugu muhiimsan ee shaqada wuxuu dhacaa Jimcaha koowaad bil kasta. Waxaa ka mid ah heerka shaqo la'aanta (boqolleyda shaqaale aan shaqaynin, tirada shaqooyinka la abuuray, celceliska saacadaha toddobaadlaha ah iyo dakhliga celceliska saacadlaha). Warbixintan waxay badanaa keentaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo weyn. Warbixinta NFP (Non-Farming Employment) ayaa laga yaabaa in laga yaabo in warbixinta ay leedahay awoodda ugu weyn ee suuqyada. Natiijadu waxay keentay in falanqeeyayaasha, ganacsatada iyo maalgashadayaashu ay filayaan lambarka NFP iyo dhaqdhaqaaqa hogaaminaya ee ay keeni doonto. Iyada oo dhinacyo badani daawanayaan warbixintan oo ay fasirayaan, xitaa marka lambarku la socdo qiyaasaha, wuxuu keeni karaa isbedel weyn.
Sida tilmaamayaasha kale, farqiga u dhexeeya xogta dhabta ah ee NFP iyo tirooyinka la filayo ayaa go'aamin doona saameynta guud ee xogta suuqa. Macaamiisha aan mushahar ahayn ayaa sii ballaadhanaya, waa calaamad wanaagsan oo ah in dhaqaaluhu sii kordho oo uu noqdo. Si kastaba ha noqotee, haddii kororka NFP uu ku dhaco sicir degdeg ah, tani waxay keeni kartaa kororka sicir bararka.
TUSAALAYAASHA XIRFADEEDKA (CCI)
Sida magacaagu tilmaamayo, tusahan tilmaamaya kalsoonida macaamilka. Waxaa lagu qeexay heerka heerka rajo-gelinta ah in macaamiishu ay la socdaan xaaladda dhaqaalaha, taas oo muujinaysa macaamiisha badbaadinta iyo dhaqdhaqaaqa kharashka. Tilmaamahan dhaqaalahaan ayaa la sii daayay Talaadadii ugu dambaysay bishii, wuxuuna qiyaasayaa sida kalsoonida dadka dareemayaan xasilloonida dakhliga ee saameyn toos ah ku leh go'aanadooda dhaqaale, si kale haddii loo dhigo, dhaqdhaqaaqa kharashka. Sababtan awgeed, CCI waxaa loo arkaa inay tahay tilmaam muhiim ah oo ku saabsan qaabka guud ee dhaqaalaha.
Cabbiraadyada ayaa loo isticmaalaa sidii tilmaam ah heerka heerka isticmaalka guud ee wax soo saarka gudaha iyo Fedraalka Federaalka oo eegaya CCI marka la go'aaminayo dulsaarka dulsaarka.
WAXYAABAHA AMMAANKA AMARKA AH
Warbixintan waxay bixisaa cabbir ah inta ay dadku u isticmaalayaan iibsiyada mudada dheer (badeecadaha la filayo in ay ka badan yihiin sanadaha 3) waxaana laga yaabaa inay siiso aragti mustaqbalka warshadaha wax soo saarka. Waa faa'iido u laheyd maalgashadayaasha oo keliya oo aan ku xirneyn heerarka kala duwan ee nidaamka, laakiin sida calaamad u ah baahida ganacsiga guud ahaan. Badeecadaha sarrifka ah ayaa ka dhigaya sare u kac wayn ee caasimadda shirkadu waxay samayn kartaa oo muujin kartaa kalsoonida shuruudaha ganacsiga, taas oo horseedi karta iibka korodhka ah ee sii kordhaya xaddiga saadka iyo guulaha saacadaha la shaqeeyay iyo mushaarka aan beeraha ahayn. Qaar ka mid ah awooda ay leedahay amarrada badeecadaha raagta oo joogto ah waa:
Burburinta warshadaha wanaagsan
Xogta ay bixiso cayriin iyo isbeddel xilliyeedka
Waxay bixisaa xogta horey u soo jiidata sida heerarka dakhliga iyo ganacsiga cusub, kuwaas oo tirinaya dakhliga mustaqbalka
Dhinaca kale, daciifnimada loo aqoonsan karo waa:
Shaybaarka baaritaanka ma socdo qiyaasta tirakoobka istaandarka si loo cabbiro qaladka
Aad u kacsan; dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa waa in loo adeegsadaa si loo aqoonsado isbeddellada muddada dheer
Warbixinta guud ee guud waxay siinaysaa aragti dheeraad ah silsiladda saadka ee calaamadaha ugu badan, waxayna noqon kartaa mid si gaar ah faa'iido u leh inay ka caawiso maalgashadayaasha si ay u helaan dareenkooda dakhliga ka soo baxa warshadaha ugu badan.
Taariikhda la sii daayo ee tilmaamahan waa laba Arbac Maalmeed ka hor oo kasta oo ka socda Guddiga Fiktoorada ee Fiktooriya (FOMC) oo ah dulsaarka dulsaarka, siddeed (8) jeer sannadkii. Ereyga 'Buugga Beedka' waxaa loo isticmaalaa warbixinta Fed loo yaqaan ' Soo-koobidda faallooyinka ku saabsan Xaaladaha Dhaqaale-Badan ee Dawladda Dhexe ee Degaanka.
Buugga Beerka guud ahaan wuxuu ka kooban yahay warbixinno ka yimid bangiyada iyo waraysiyada dhaqaalaha, khabiirada suuqyada, iwm. Waxaana loo isticmaalaa in lagu wargeliyo xubnaha ku saabsan isbedelka dhaqaalaha laga yaabo inay dhaceen tan iyo shirkii ugu dambeeyey. Wadahadalada badanaaba waxay ku saabsan yihiin suuqyada shaqada, mushaharka iyo cadaadiska qiimaha, tafaariiqda iyo hawlaha ganacsiga iyo soo saarida wax soo saarka. Muhiimada buugaagta Buugaagta waxay keenaysaa maalgashadayaashu waxay tahay inay arki karaan faallooyin kuwaas oo horay u socdaan waxayna caawin karaan inay saadaaliyaan isbeddellada iyo rajada laga qabo bilaha soo socda.
Heerka dulsaarku waa darawallada ugu weyn ee suuqa miyiga iyo dhammaan tilmaamayaasha dhaqaale ee kor ku xusan waxay si dhow ula socdaan Guddiga Fudud ee Fudud ee Federaalka si loo go'aamiyo caafimaadka guud ee dhaqaalaha. Fedaraalka ayaa go'aan ka gaari kara haddii ay hoos u dhigi doonaan, kici karaan ama ka bixi karaan dulsaarka dulsaarka, dhammaantood waxay ku xiran yihiin caddeymaha lagu soo ururiyey caafimaadka dhaqaalaha. Jiritaanka dulsaarka dulsaarku wuxuu u ogolaanayaa amaahda inay si dhaqso ah ujiraan halkii ay sugi lahaayeen in ay lacagtan ku badbaadiyaan si ay u iibsadaan. Dakhliga dulsaarka hooseeya, dadka doonaya in ay lacag ka amaahdaan si ay u sameeyaan iibsiyada waaweyn, sida guryaha ama baabuurta. Marka macaamiisha ay bixiyaan wax yar oo daneynaya, tani waxay siisaa lacag dheeraad ah oo ay ku bixiso taasoo abuuri karta saameyn aan caadi aheyn oo ah kharashka kordhaya inta uu socdo dhaqaalaha. Dhinaca kale, heerka dulsaarka sare wuxuu ka dhigan yahay in macaamiisha aysan heysan dakhli badan oo la goyn karo oo ay tahay inay dib u goynayaan kharashka. Marka heerka sicirka dulsaarka ah lagu daro heerarka amaahda amaahda, bangiyada waxay yareeyaan deynta. Tani waxay saameyneysaa macaamiisha, ganacsatada iyo beeralayda oo yareeyn doona kharashka qalab cusub, markaa waxay yareeyaan wax soo saarka ama yareynta tirada shaqaalaha. Mar kasta oo dulsaarku kor u kaco ama hoos u dhaco, waxaynu maqlnaa heerka lacagta federaaliga ah (bangiyada sicirka ayaa isticmaalaya si ay u amaahiyaan lacago kale). Isbeddellada dulsaarka dulsaarka waxay saameyn karaan sicir-bararka iyo dhaqaalaha labadaba. Sicir bararku wuxuu loola jeedaa kororka qiimaha badeecadaha iyo adeegyada waqti ka dib, iyadoo ka dhalatay dhaqaale xoogan oo caafimaad leh. Si kastaba ha noqotee, haddii sicir-bararka laga tago aan la ogeyn, wuxuu keeni karaa khasaaro weyn oo ah awoodda wax iibsiga. Sida la arki karo, saamiyada dulsaarku waxay saameeyaan dhaqaalaha iyagoo saameynaya macaamilka iyo kharajka ganacsiga, sicir bararka iyo dib u soo celinta. Iyada oo la isku-hagaajinayo heerka fedraalka ee federaalka, FED wuxuu ka caawiyaa dhaqaalaha in uu dheellitiro muddada fog.
Fahamka xiriirka u dhexeeya dulsaarka iyo dhaqaalaha Mareykanka, ayaa ka caawiya maalgashadayaasha in ay fahmaan sawirka weyn iyo inay sameeyaan go'aamada maalgashi wanaagsan.
Warbixintu waxay ka kooban tahay tirada guryaha cusub ee bilaabay dhismaha bisha dhexdeeda iyo sidoo kale iibka guryaha ee hadda jira. Hawlaha degaanka waa sabab weyn oo kobcinta dhaqaale ee waddanka waana qiyaas wanaagsan oo dhaqaale. Guryaha hadda jira ee guryaha iyo bilawga cusub ee guriga ayaa loo arki karaa calaamad dhaqaale daciif ah. Ogolaanshaha dhismaha labadaba iyo tirooyinka guryaha waxaa lagu muujin doonaa isbeddel boqolkiiba inta ka horreysa bilaha hore iyo sannadka sannadka. Guryeynta waxay bilaabmaysaa iyo dhisidda stats labadaba waa loo tixgeliyaa tusmooyinka hoggaaminta, iyo tirooyinka rukhsadda ayaa loo isticmaalaa in lagu xisaabiyo Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shidaalka. Tani caadi ahaan maaha warbixin sheegaya in ay suuqyada ku riixaan, hase yeeshee falanqeeyayaasha qaarkood ayaa isticmaali doona warbixinta gurmadka si ay u caawiso abuuritaanka qiyaasta tilmaamayaasha kale ee macaamiisha.
Warbixintaan tirakoobka waxaa soo saaray Xafiiska Falanqaynta Dhaqaalaha (BEA) saddexdii biloodba mar wuxuuna soo koobayaa dakhliga saafiga ah ee shirkadaha ee Dakhliga Qaranka iyo Xisaabaadka Cuntada (NIPA).
Muhiimadoodu waxay ku xiran tahay iswaafajinta miisaaniyadda, iyada oo faa'iidada shirkadeedu ay ka tarjumeyso kororka iibka iyo dhiirigelinta kobaca shaqada. Shirkadaha waxay isticmaalaan faa'iidadooda si ay u kobciyaan maalgelinta, bixiyaan saamileyda saamileyda ah ama dib-u-maalgelinta ganacsigooda. Intaa waxaa dheer, maalgashadayaashu waxay raadiyaan fursado maalgashi wanaagsan, sidaa daraadeed waxay kordhiyaan waxqabadka suuqyada.
Isu dheelitirka Ganacsiga waa farqiga u dhexeeya soo dejinta iyo dhoofinta dal dal la siiyo muddo wakhti ah. Waxaa loo adeegsadaa dhaqaaleyahannada sida qalab tirakoob, maadaama ay u suurtageliso inay fahmaan awoodda dhaqaale ee dhaqaalaha dalka marka la barbar dhigo dhaqaalaha dalalka kale iyo socodka ganacsiga ka dhexeeya quruumaha.
Suuq-geynta dheeraadka ah waa suurad wacan, halka qiimaha wanaagsan uu macnaheedu yahay in dhoofintu ka badan tahay in soo dejinta; halka dhinaca kale, khalkhalka ganacsigu wuxuu u horseedi karaa deyn muhim ah oo gudaha ah.
Tirakoobka waxaa la daabacay bil walba.
Qiyaasta tirakoobyadani waa tilmaam dhaqaale ee caafimaadka guud ee dhaqaalaha, oo ay go'aamiso fikradda macaamiisha. Waxay ka kooban tahay dareenka caafimaadka maaliyadeed ee shakhsiga, caafimaadka dhaqaalaha gobolka ee muddada gaaban iyo saadaalinta koritaanka dhaqaale ee muddada dheer.
Dareenka macaamilka waxaa loo isticmaali karaa si loo eego sida dadka ladnaansho ama feker ahaaneed ugu wajahan xaaladaha suuqa ee hadda jira.
Wax soosaarka PMI
Wax soosaarka PMI wuxuu calaamad u yahay caafimaadka dhaqaale ee qaybta wax soo saarka ee waddan. Tilmaamuhu wuxuu ku salaysan yahay sahanada maamulayaasha iibka ka soo jeeda shirkadaha hormoodka ah ee qaybta wax soosaarka, iyagoo cabiraya ra'yigooda ku saabsan xaaladda dhaqaale ee hadda iyo rajada mustaqbalka.
Tirakoobka waxaa daabacay Markit iyo ISM, halkaas oo sahaminta ISM loo arko in ay tahay muhiimad weyn.
Kordhinta index wuxuu keenayaa xoojinta lacagta iyo calaamadda dhibicda 50 waxaa loo tixgeliyaa heerka muhiimka ah, taas oo kor u kacday dhaqdhaqaaqa ganacsiga wax soo saarka ee kor u kaca iyo hoos udhaca.
Tirakoobka PMI ee waxsoosaarka ayaa la daabacay bil kasta.